APPLE "NORTHERN SYNAP": SHARAXAADDA KALA DUWANAANSHO, BEERASHADA AGROTECHNICS - GEED GEEDEEDKA
Horumarka geedka tufaaxa "Northern Synapse": faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida kala duwanaanta, beerashada iyo daryeelka
Tufaaxa xilliga qaboobaha ah ee "Northern Synapse" kala duwanaan maaha kuwo aan laga helin dhadhanka noocyada ugu caansan ee aristocracy ee waqooyiga dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, soo bixitaanka kooxdan waxaa sababay rabitaanka lagu hagaajinayo midhaha hadda jira, loogu talagalay dadka maxalliga ah.
Kala duwan ayaa leh iska caabin xoog leh oo dhaxan, taasoo ah mid muhiim u ah gobollada xaaladaha cimiladu ay xadidanayaan xilliga sii kordhaya ee dhirta. Aynu isku dayno inaanu ogaanno sida loo koro geedkii nacniga waqooyiga Northern Synaph on our site, iyo falanqaynta faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada geedka.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah tufaax, celceliska qiyaasaha 80 calories, inkastoo xaqiiqda ah in qaybta afaraad ee miro ayaa ka kooban hawada. Taasina waa sababta ay mirahaasi aysan ku dhicin biyo.
Taariikhda noocyo tufaax ah
Aragtida "Northern Synapse" waxay sababtay rabitaanka jilayaasha si ay u abuuraan wax la mid ah noocyada tufaaxeed ee caanka ah "Tijaabinta Crimean", midhahaas oo si gaar ah loogu soo bandhigay pre-revolutionary beau monde. Waxaa jiray dhadhan weyn oo tufaaxaan ah, laakiin gaadiidka qaaliga ah iyo kuwa dheerba waxay keeneen cadho. Sidaa darteed, shaqaalaha Michurin All-Union Research Union of Horticulture iskaa wax u qabso si ay u abuuraan wax cusub iyo daruuri leh hidda diidmada barafoobay.
Sababtoo ah tijaabooyin dheer iyo tijaabooyin ah, ayaa xerta iyo raacitaanka Michurin, Sergei Isaev, oo soo saaray fasalka Northern Synapse. Waxaa lagu heley wasaqeynta bilaashka ah ee tufaaxa "Chinaka Kandil" oo si buuxda loogu daro tayada dhadhanka ugu sarreeya ee leh dulqaadka cimilada adag. Qoraaga ayaa ku riyooday sida tandem.
Marxalado kala duwan ayaa loo qoondeeyey gobollo kale, iyada oo la tixgelinayo isbeddellada cimilada iyo carrada. Sidaa daraadeed, dhirta waxaa laga heli karaa maanta oo ah xayawaanka guryaha iyo beeraha shirkadaha ka shaqeeya Ruushka. Intaa ka sokow, hidaha "Northern Synapse" ayaa aasaas u ah noocyada soo socda - "Sinqovsky Sinap", "Moscow Winter", "Moscow Later". Kala duwan waxaa lagula talinayaa in lagu beero si loo isticmaalo beerista geedaha tufaaxa ee hore.
Qeexida astaamaha dhirta tufaaxa "Northern Synapse"
Tilmaamaha aasaasiga ah ee noocyada kala duwan ayaa ah diiqad, adkaysiga barafka iyo awoodda si buuxda loogu horumariyo xilliga gaaban ee sii kordhaya, iyo sidoo kale sifooyinka wanaagsan ee dhirta. Tixgeli sifooyinka "Northern Synapse" si faahfaahsan.
Ma taqaanaa? Midhaha "Northern Synapse" waxa ay ku kala duwan yihiin quruxda gaarka ah ee muuqaalka iyo dhadhanka, iyada oo shuruudaha xagaaga ah ee kuleylka ah iyo dayrta leh heerkul aad u kacsan habeenkii iyo maalinba. Marka la eego nuuciintaan, beeralayda khibrad leh ma ahan kuwo degdeg ah si aan tufaaxa uga soo qaadin geedaha, tan iyo miraha dhicisoobay luminayaan dhadhankooda oo si liidata loo kaydiyo.
Dabiiciga ah, geedo tufaaxu waxay ku kala duwan yihiin taayirada dhaadheer iyo dherer dherer ah, iyagoo gaadhaya height 6-7 mitir. On laamood qalafsan awood leh, tiro badan oo khafiif ah, caleemaha dhinaca dhuxusha waxaa la aasaasay. Midabka cirifka cagaarka ah. Caleemaha waa mid aad u sareeya, qoyan, leh dusha sare iyo barxadda hoose ee barxadda, midab madow-cagaar ah. Duufaannada lugaha gaaban, ubaxyo waa weyn, oo leh dhar casaan. Miraha waxaa lagu xiraa koritaanka laanta qalfoofka iyo caleemaha lateral.
Dhirta tufaaxa ee Northern Synaph ayaa si dhexdhexaad ah u adkeynaya cimilada qoyan, budada iyo xajka, sidaas darteed waxay u baahan yihiin daryeel haboon iyo tallaabooyin ka hortag ah oo ka dhan ah cudurrada.
Kalluumeysiga tufaaxa noocyada kala duwan waxay bilaabmaysaa bisha Oktoobar. Iyo bisaylka buuxa oo kaliya ayaa imaanaya kaliya 2-3 bilood kadib, u dhaw Sannadka Cusub. Miraha waxay leeyihiin caraf udgoon leh, cabbirka dhexdhexaad ah, qaabka caadiga ah ama qaabka stacanoid iyo midab jaalle ah-cagaaran. Mid ka mid ah tufaaxu wuxuu miisaankiisu ka jiraa 100 ilaa 150 g. Intii lagu kaydin lahaa, fara badan oo casaan ah ayaa ka muuqda midhaha. Maqa yar oo dheecaan leh, oo daboolaya ubax, ubax cad cad ayaa muuqata. Jidhku waa mid fiican, mid casri ah, baraf cad oo midab leh, mararka qaarkoodna leh cagaar cagaaran. Miro ayaa dhadhan macaan iyo dhanaan, oo leh jilicsan yar oo basal ah.
Tilmaamaha miro ayaa ku jira tayada dheeriga ah ee ilaalinta bacda iyo muuqaalada waxtar leh. Iyadoo la raacayo shuruucda kaydinta iyo diyaarinta saxda ah ee maqaasiinka, tufaaxa kala duwanaanshahan waxay socon kartaa illaa Luuliyo. Tayada tayada leh ayaa ah tufaaxa tufaaxa: waxay ku habboon yihiin isticmaalka caydhinta, iyo macmacaanka guriga iyo macmacaanka. Bannaanka Siberian gaar ahaan qadarinta noocyada kala duwan ee dhadhan gaar ah in miraha jiilaalka ay ku bixiyaan khamri guriga lagu sameeyey.
Ma taqaanaa? Dhakhaatiirtu waxay u maleynayaan in saxan aan lahayn tufaaxa feerka ay tahay cayda dhabta ah iyo xusuusinta faytada iyo antioxidants ee lagama maarmaanka u ah jidhka, saddex daloolow laba meelood oo ka mid ah maqaarka miraha.
Faa'iidooyinka iyo noocyada qasaaraha
Inkasta oo ay jaangooyadu u suurtagashay in ay u riyaaqaan riyooyinkooda dhabta ah marka ay abuurayaan kala duwanaanshaha Northern Synapse, waxay u muuqatay mid aan fiicnayn. Beereyaalku waxa ay heleen labada dhinacba mid togan iyo kuwa xunba. Jawaabaha, dhirta caanahan ayaa badanaa loo yaqaan "boqorrada beerta" waxayna ku sharraxaan tayadaas:
qaangaar miro leh;
Hardiness jiilaalka aad u fiican ee geedaha tufaaxa;
awooda lagu beeray rootstocks gaaban sannadka 2aad;
ilaalinta tayada miraha 7-8 bilood;
Awoodda geedaha tufaaxa ee dadka waaweyn ee Northern Synapa si sare loogu qaado. Marka la eego shuruudaha agrotechnology sax ah, ilaa 170 kg oo tufaax ah ayaa laga goyn karaa geed keliya.
Iyada oo dhammaan faa'iidooyinka liiska ku qoran, ayaa duulimaad lagu sameeyay balaash. In geedi-socodka beerashada ay u muuqatay in geedo tufaax u baahan tahay dayactir joogto ah. Iyo, haddii aysan jirin wakhti ku filan ama khayraadka kale si loo abuuro shuruudaha lagama maarmaanka ah ee kala duwan, goosashada si deg deg ah u dhaco oo noqda qulqulo qiyaas ah.
Si ay tufaax si ay u gaaraan Bisaylkiisa buuxa, cimilada diiran xagaaga oo dhan waa qasab. Intaa waxaa dheer, haddii ay sidoo kale tahay dayrta roobabka leh cimilada xasiloon iyada oo aan isbeddel deg-deg ah ku sameynin heerkulka, ma jiri doono wax culus oo midhaha leh. Iyada oo fruiting badan, tayada dhadhanka ah ee tufaax yihiin hoos.
Sababta dhicitaanka iyo dhererka jirka. Iyadoo sida weyn ee jiilaalka ah, waa ay adag tahay in la helo tufaax jiilaalka, iyaga oo ka ilaalinaya dharbaaxo iyo abrasions. Haa, oo geedku wuxuu abuuraa hoosaad badan oo dayrka ama beerta. Waxa kale oo ay xun tahay in miraha ay u bislaadaan goor goosashada, iyo isticmaalka ay tahay inay jiifaan laba bilood oo kale.
Waa muhiim! Marka kaydinta tufaaxa xilliga qaboobaha ee laguma talinayo in laga soo saaro dermo. Wuxuu ka ilaaliyaa uurjiifka luminta qoyaanka iyo faleebka bakteeriyada iyo fungal fungal.
Waqtiga iyo xulashada goob loogu talagalay beeritaanka geedka tufaaxa
Noocyada tafaariiqda Northern Synaph ayaa si fiican u horumarin doona markii ay beerto abuuritaan ah oo ku yaal aag aad u iftiimaya, oo aan waxba ka horjoogsaneynin helitaanka qorraxda.
Raaxo gaar ah ee geedku wuxuu siin doonaa nalka dabacsan oo dabacsan. Sonkor iyo carrada madow oo leh ashyaa dhexdhexaad ah ayaa qaban doona. Markaad dooranayso meel, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso meesha ay ku yaalaan biyaha dhulka. Fikrad ahaan, waa inay ahaadaan meel fog 2-2.5 m, haddii kale xididdadu waxay bilaabi doonaan inay kala-baxaan qoyaan badan, oo geedku wuu dhimanayaa.
Markaad go'aansato meel aadna heshay waxyaabo tayo sare leh, taas oo ah mid muhiim u ah, waxaad bilaabi kartaa inaad degto.
Beeraha qaarkood waxay doorbidaan abuurista geedka fidida, sababtoo ah geedaha noocan oo kale ah waxay leeyihiin waqti ay ku qabsadaan, koraan xoog, iyo inay koraan xididada iyo geedo xoog leh xilliga qaboobaha. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa in la soo galo toddobaadyadii ugu dambeeyay Abriil iyo horraantii Maajo. Waxaa muhiim ah in dhulka uusan qaboobin, markaa, marka la eego qaababka cimilada ee gobol gaar ah, sug ilaa inta dhulka ay ku filan tahay. Faa'iidooyinka khaaska ah ee xilliga gu'ga waa baahida loo qabo in si joogto ah u qoyaan nidaamka xididka. Khabiiro kale oo loogu talagalay noocyada jiilaalka-adag waxay doorbidaan beeritaanka dayrta, iyaga oo xoogga saaraya awooda geedaha sida loo xoojiyo xididdada, taas oo sahlaysa carrada dayrta ee digaaga, isla markaana dhakhso u kaca si ay ula qabsadaan bilowgii kuleylka. Fidinta noocan oo kale ah waxay ka fiican tahay qorshaynta dhowr asbuuc ka hor bilowga bilowga. Shuruudaha ugu wanaagsan waxaa loo tixgeliyaa bilowga Oktoobar.
Marka loo eego Fiisooyinka, geedo yar yar oo aan ka badnayn 2 sano waa in la beeray guga, iyo dhammaan tijaabooyinka kale, marka laga reebo kuwii hore, waa in la beeray dayrta. Haddii ay jirto baahi loo qabo in lagu beero geedo tufaax ah oo 10-sano jir ah, waxaa wanaagsan in la qorsheeyo beeritaanka xilliga qaboobaha si loo gooyo dhirta sida ugu macquulsan.
Waa muhiim! Ma jirto wax loo adeegsan karo mulching wareegyada pristvolnyh ee dhirta dhirta cufan. Waxay oxidize ciidda geedi socodka of decomposition, taas oo aad u aan loo baahnayn dalagyada miraha.
Shaqo diyaargarow ka hor intaan la dhicin
Si aad isugu diyaariso beeritaanka Apple waa inay ahaataa hal bil. Inta lagu jiro muddadan, waxaa muhiim ah in la ogaado goobta ay ku kala duwan yihiin, oo u diyaargaroobaan 70 cm oo qoto dheer iyo qiyaastii 1 m ballaaran.
Meelaha dabaysha, waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo godadka dhexda dhexe ee qulqulka si loogu sii dheeraado laanta geedaha yar yar. Saldhigga qoryaha ayaa ka wanaagsan in la gubo, si looga hortago muuqaalka kalluunka inta lagu jiro kala-soocidda maaddada. Markaas dhulka sare waa isku qasan qaybo siman oo ah humus, peat, ciid iyo compost. Qeybta hoose ee ceelka waa la miiray, ka dibna waxaa ka buuxsameysa dusha sare ee isku darka. Tani waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo in natiijada ka dhalatey soo-saarka ciidda, geedka tufaaxa uusan u soo bixin meel dhexe oo qoyan qoto dheer, halkaasoo biyaha la soo ururiyay ay burburin doonaan xididada. Gebogebada, godadka waxaa lagu daboolay caag balaastig ah waxayna xirtaan cidhifyo. Inta lagu jiro 3-4 todobaad microclimate wanaagsan oo loogu talagalay nidaamka asaasiga ah ee geedaha tufaax ah waxaa la aasaasay halkaas.
Ha iloobin maalin ka hor inta aadan beeri ku daadin xididdada yaryar ee weel biyo ah. Geedku waa inuu si fiican u buuxsamo qoyaan.
Waa muhiim! Masaafada u dhexeysa gooyooyinka Northern Synapse iyo geedaha deriska ah ee beerta waa inay ahaadaan 7 m.
Xeerarka abuuritaanka geedo tufaax ah
Sax ah beerto geedo tufaax ah Waxyaabo kala duwan ayaa muhiim u ah heerarka geedka:
Kormeerka geedo ee kallana, meelaha la qalajiyey iyo dhaawaca farsamoyaqaanka nidaamka xididka, iyo sidoo kale joogitaanka caleemaha qalalan. Haddii ay dhacdo xaalado laga shakiyo geesaha shaki leh ee ku yaal xuduudaha, waa in la gooyaa si loo noolaado qoryo.
Daweynta xididdada dhoobo.
Beerto ee ceelka diyaarsan oo leh taxadar qumman ee nidaamka xididka (peg waa in la dhigo dhinaca koonfureed ee jir ah, si looga hortago qoraxdu).
Waraabinta geedo (haddii beeritaanka la fuliyo guga, biyaha waa in lagu shubaa ilaa dhulka uu joojiyo qoyaanka).
Xididada xididdada leh substrate ka soo lakabka sare ee dhulka oo si taxadar leh u xoqdo (jirridda waa in la ruxruxo xoogaa dhowr jeer sidaa daraadeed voids waxay sameeyeen dhulka hoostiisa iyo xididdada aan qallajin).
Kormeerka collar xididka. Waa inuu kordho 4-5 cm dhulka kor ku xusan. Goobta meeshan waa mid qoto dheer oo qadar yar oo qadar yar ah, sare u qaadidda xad dhaafka ah waa fuuqbax halis ah iyo dhimasho geedka. Way ka fiican tahay inaad ku shubtid tuulo yar oo carrada ah oo ku saabsan kala-guurka xididka si ay u soo baxaan biyaha si ay u socdaan inta lagu jiro waraabka iyo roobabka.
Mulching pristvolnogo wareega. Waxaa muhiim ah in laga baxo geedkii 15 cm, si loo yareeyo khatarta caabuqa ee microbesic microbes loo sameeyay intii lagu jiray burburinta mulch.
Laamaha maqaarka ah ee looxa lagu rakibay (waxaa wanaagsan in la isticmaalo sheyga maro tan).
Ma taqaanaa? Geedka tufaaxa ee ugu da'da yar, ayaa dib loogu beeray 1647 Peter Stewensant, weli wuxuu ku koraa Manhattan oo, si qulqul leh, wuxuu soo saaraa midho.
Xeerarka daryeelka xilliyeed ee geedka tufaaxa
Daryeelka liita ee wakiillada noocyada jiilaalka-adag waxay saameyn doontaa horumarinta warshadda iyo dhalidda. Sidaa darteed, kiiskan, waxaa muhiimad gaar ah u ah waraabinta wakhtiga, quudinta, dabacsan ciidda, wareegyada pristvolnyh ee caleemaha iyo ka hortagga cudurada, jiirka iyo cayayaanka. Waxaan fahmi doonnaa habka, meesha laga bilaabo bilawga geedaha tufaaxa "Northern Synapse."
Diidmada geedka tufaaxa
Tilmaamahan waa in uu ku mashquulaa marka uu geed ku beeri doono, isaga oo soo qaadanaya deriska saxda ah. Xaqiiqdu waxay tahay noocyada kala duwan waxay ku kooban yihiin qayb ahaan is-bacdi. Tani waxay ka dhigan tahay in raajiyeyaasha kale loo baahan yahay si kor loogu qaado wax soosaarka ilaa 40%. Sida laga soo xigtay botanist oo xisaabinaya saamiga florizin ee saldhigyada saldhigyada dhirta pollinated iyo pollenators pollen, boqolkiiba fiican ee dhididka ee kiisaska xaafadda leh noocyo tufaax ah: Slavyanka, Pomon Shiine, Antonovka caadiga, Pepin saffron.
Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in noocyada xagaaga aanay waxtar lahayn ee soo socda ee jiilaalka, sidaa daraadeed, waxay kugula talinayaan geedo beerta ku yaal sida ku xusan farsamadan.
Daweynta Cayayaanka iyo Cudurrada
Si looga hortago fangaska iyo bakteeriyadu in ay weeraraan geedaha tufaaxa, waxaad ka taxadartaa nadiifinta guga ee dhirta adoo ka saara dhammaan meelaha waxyeelloobay iyo kuwa dhintay ee guga. Xilliga dayrta, ha iloowin inaad carrada qallajisid, xor ka ah caleemo dhacday, halka cayayaanka waxyeellada leh ay ku badan yihiin iskudhafka iyo taranka taranka.
Guga ka hor inta aan la gooyin, biqilka foliar ee geedo midho leh oo leh sulfate naxaas ama "Skor" waa khasab. Ka dib markii ubax, taajka waxaa lagu daaweeyaa oxychloride naxaas ah. Marka marka miraha laga saaro geedka, waxaad u baahan tahay inaad ku buufiso laamaha iyo jirridda leh sulfate copper, ama xal dareeraha ah saabuun. Laakiin kahortaga ugu wanaagsani waa daryeel caafimaad leh.
Marka ugu horeysa ee la ogaado calaamadaha maskaxda, xayrta maqaarka ama cytosporosis, daaweyntu si degdeg ah ayaa loo sameeyaa iyada oo la adeegsanayo diyaarinta "Khom", "Topaz", "Sulfur Colloid", "Strobe".
Waa muhiim! Ka soo jeeda haadiga hunguriga ah ee weerara caleemaha dalagyada miraha xilliga jiilaalka, waxay badbaadin doontaa xaashi nus-mitir ah oo caleen ah, kaas oo lagu duudduubay geed ku dhow dhulka. Haddii kale, mesh cufan cufan, laamood cufan, iyo xitaa xoqan.
Sida loo sameeyo waraabinta
Dhirta geedaha, iyada oo aan loo eegin noocyada kala duwan, waxay u baahan yihiin 3-5 waraabiyo xilliga xagaaga ee horumarka iyo fruiting. Xaaladaha cimiladu waxay hagaajin karaan qadarkan, iyagoo intaa ku daray in milkiilayaasha beerta badan iyo dhirta geedaha. Marka ugu horeysa dhirta oo dhan waxay u baahan yihiin in la waraabiyo ka hor inta ku hari bilaabaan in ubaxu. Haddii ay aad u kulushahay dibedda, markaa dhirta da'yarta ilaa 5 sano jirka ah waa in lagu daraa qoyaan asbuuc kasta, iyagoo eegaya qiyaasaha isticmaalka biyaha (waxaan ku jiri doonaa iyaga hoose).
Inta kale ee dalagyada miraha ee beerta ayaa la diyaarin doonaa waraabinta labaad ka dib markii ay jajabeen iyo ugxan-bilaabmaa bilaabmaa inay sameeyaan. Cimilada kulul ayaa sii kordheysa waraabinta inta lagu jiro koritaanka greenfinches, haddii kale waxay joojin karaan sii kordhaya oo u qaxaya. Qoyaanka ugu dambeeyey waxaa la sameeyaa 3 toddobaad kahor inta aan miraha laga saarin. Kuleylaha xasiloon ee bisha Oktoobar mar kale waxay muhiim u tahay in geedo biyo ah lagu daro si loo yareeyo qoyaanka oo looga ilaaliyo ka qaboojinta jiilaalka.
Qadarka biyaha ee looga baahan yahay geedka kasta waxaa lagu xisaabiyaa da'da dhaqanka. Sidaas darteed, geedo yar yar ilaa 1 sano, heerka lagu taliyey waa 20-30 litir oo ah dareeraha halkii mitir labajibbaaran. Sannad kasta, geedo tufaax ah waa in lagu daraa baaldi biyo ah ilaa ay ka gaaraan 6 sano. Shayada hore waxay u baahan yihiin qiyaastii 6-10 baaldiyaal oo biyo ah halkii mitir labajibbaran ee wareegga miiska.
Waa muhiim! Ku waraabinta dhirta tufaaxa xilliga beergooyska isla markiiba ka dib marka ay la socoto koritaanka caleemaha cusub ee la burburin doono dhaxan. Dhaawaca noocan oo kale ah, geedku wuu dhimanayaa.
Dharka ugu sarreeya ee geedaha tufaaxa "Sinado Waqooyi" waxa go'aaminaya xilliyada dhirta. Warshadu waxay dareemeysaa in yaraanta ba'an ee maaddooyinka waxtar leh xilliga guga inta lagu jiro dhismaha xoogan ee caleemaha. Waxaa magdhow lagu siiyaa Bacriminta kiimikada leh ama xal of nitroammofoski iyo amooniyam amaseiyoon. Wixii horumarinta firfircoon ee taajka, waxaad dhigi kartaa geedka digaag (3 jeer ka hor inta aan la samaynin miraha).
Bacriminta xiga waa la fuliyaa marka uu muddeyntu socoto, taas oo ah, ugxan-abuurka ayaa lagu sameeyaa geedka. Waxaad samaysan kartaa walxo adag oo isku dhafan ama isku dar ah 1 baaldi ee compost, 50 g of chloride potassium, 140 g of superphosphate, 30 g of nitroammofoski.
Dhammaadka xagaaga, geedaha tufaaxa waxaa lagu quudin jiray humus ama bacriya iibsan oo lagu magacaabo "dayrta" si loogu diyaariyo jiilaalka. Iyo sidoo kale quudiyo sifooyinka u-adkaysi u ah "Northern Synapse", taajka tufaax leh superphosphate (30 g: 1 l oo biyo ah).
Si aad uga takhalusto substrate oxidised ka dib 3-4 sano, liming waxaa lagu fuliyaa heerka of 150 g oo ah burka dolomite halkii 1 mitir oo labajac ah ee beerta.
Manjooyin kasta oo geedo tufaax ah waxaa ka mid ah nadiifinta dhirta meelaha ay saameeyeen cudurka ama cayayaanka, qaboojiyaha qaboobaha iyo laanta qadiimiga ah. Tani waxaa loo sameeyaa wareegteyn wanaagsan, taas oo ka hortagaysa cudurrada dhirta.
Iyadoo la tixgelinayo isbeddelka "Northern Synapse" laamaha si ay u horumariyaan iyada oo aan la dhejin karin taajkii, ma jirto baahi loo qabo dhismaha. Guga kasta waa inuu noqdaa mid nadaafadeed, ka dib markii la jarjarey. U hubso inaad xirto qeybo ballaaran oo leh garoon beerta. Xilliga dayrta, ka saar korniinka daciifka ah, sidaa darteed geedku si badbaado leh ayuu u badbaadi karaa jiilaalka.
Ma taqaanaa? Первую обрезку яблонь проводят сразу после посадки саженцев, удаляя верхние части со ствола и скелетных веток на уровне 80 см от земли.
Dhirta hal sano ee "Northern Synapse", kororka waxaa la saaraa 40-20 cm Sanadka soo socda, laamaha waa la gaabin si taaj loo dhajiyo laga bilaabo sprouts of saddex tiir. Xaaladdan oo kale, dabcan, ka tago caleemaha xoog leh.
Geedaha tufaaxa ee jiilaalka
Kacsanaanta sii kordhaysa ee kala duwan ee "Northern Synapse" waxay ahayd sababta beerta udhexeeya iyaga oo u yeedhaya "dhar-xoorta". Jiilalka jilicsan ee jiilaalka waxaa lagu beeray by jilayaasha u ogolaan geed si loo dulqaadan xitaa dhaxan 40-dhibcood si fudud. Sidaa daraadeed, caleemaha ayaa caan ku ah dadka deggan gobolka Central Black Earth ee Ruushka.
Ka ilaali daaqadaha adag waa inay ahaadaan dhirro dhalinyaro ah oo aan weli sii xoogaysan, kuwaas oo aan gaarin shan sanno. Ujeedadaas, lakabka 20-centimitir ee wareegyada pristvolny ee mulch.
Waa wakhti goosashada laga bilaabo geedaha tufaaxa Northern Synaph ee bisha Oktoobar. Miraha, maadaama aysan weli gaarin bislaanshaha buuxa, aan la qubaysan laanta. Cimilada qalalan, waa in si taxadar leh looga saaraa qalab gaar ah oo si sahlan loo dhisi karo guriga oo leh ul dheer iyo gabal caag dhalada ah. Apple picking wuxuu ka bilowdaa laanta hoose, si tartiib tartiib ah ayuu kor ugu kaca. Ma ruxi kartid foosto, taas oo u ogolaaneysa walbahaarka miro.
Ma taqaanaa? Haddii aad dhashid boqol tufaax oo ka mid ah farcanka geedka, waxay gebi ahaanba ka duwanaan doonaan.
Vault ayaa keena oo keliya miro dhan, iyada oo aan xoqan, xargo iyo dhoobo. Si looga hortago in tufaaxu ka baxo, waa in mid kasta lagu xereeyaa warqad nadiif ah oo si taxadar leh loo dhigo lakab, halkii aad ka heli lahayd bulkuleelo, ama alaab alwaax ah.
Dhamaan golaha, marti-galiyayaashu waxay la wadaagaan waayo-aragnimadooda khudradda miraha ka samaysan xal manganese ah oo daciif ah. Laakiin khabiirada arrintaani waxay leeyihiin fikradahooda u gaarka ah: oo leh jeermi-dilka, tufaaxa waa in la tirtiro qoyaanka qoyaanka, oo kaydka wax-soo-saarka ayaa la burburin doonaa. Sidaa darteed, habkani wuxuu u fiican yahay miraha dayrta.
Iska ilaali in Maqsin heerkulka u dhexeeyaa 1-3 heerkulka kulaylka, iyo qoyaanka hawada kama badna 90%. Haddii ay dhacdo in shaxanku ka hooseeyo 85%, waxaad u baahan tahay inaad ku qoydo duubka saliidda cuntada. Bixi hawo fiican oo tayo leh qolka oo diirran derbiyada si khudradda iyo khudradda aysan ku dhibin heerkulka ba'an ee jiilaalka.
Qaababka kale ee kaydinta waxay bixiyaan in la seexdo tufaaxa qoyan webiga ama balka. Waxaad ku badbaadin kartaa bacaha caag ah.
Hazel (fowdada) iyo duufaannada: farqiga iyo sifooyinka
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaatid xayeysiinta dhagxaanta ee guriga
Kala saarista gooynka laamoon: goosashada, rooting, beeritaanka iyo daryeelka
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato diyaargarowga Tanrek ka soo duudduubka baradhada Colorado
Sannad kasta, digaagga ayaa ka dhasha cuduro badan oo sababa khasaaro beeraleyda. Mid ka mid ah cudurrada ugu caansan waa coccidiosis. Maqaalkeena waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhasha cudurkan, oo ku saabsan calaamadaha iyo qaababka daaweynta. Waa maxay cudurka this Coccidiosis - mid ka mid ah cudurada parasitic ee keena noolaha ugu fudud unicellular - Eimeria. Read More
Sida loo sameeyo mawduuc leh gacmahaaga
"Dhag nool oo" miro gurig ah? Talooyinka loogu talagalay xayawaanka sii kordhaya